एकल नारीको साहासिक यात्रा: पाँच हजारदेखि पाँच स्कूलसम्म - Everest Talk
एकल नारीको साहासिक यात्रा: पाँच हजारदेखि पाँच स्कूलसम्म1 min read
चट्टान फोरेर पीपल त निस्कन्छ भने प्रतिकूलतालाई चिर्न कुनै गाह्रो कुरो भने होइन ।
२०७६, २६ कार्तिक मंगलवार १०:५६
in मुख्य समाचार, लाइफ चेन्जिङ्
जिन्दगीमा सोचे जस्तो कहिल्यै हुँदैन । सबै सोचेअनुसार नै भैदिए, त्यो जिन्दगी पनि जिन्दगी नहोला । अक्सर कस्तो भइदिन्छ भने, हामी जिन्दगीका योजनाहरू आफूलाई अनुकूल रहने गरी निर्माण गर्छौं, तर समयको माग अर्कै भैदिन्छ । समयले जिन्दगीमा अनेक प्रकोपहरू ल्याइदिन्छ । जीवन थङ्थिलो बनाइदिन्छ । कति मानिसहरू त्यही थङ्थिलोपनामा डुबेर जिन्दगी बिताइदिन्छन् । त्यहीबीच कोही भने ज्वालामुखी बनेर निस्कन्छन् र जीवनमा अति समान्य मानसिकता भएका, सामान्य जनहरूले कल्पनासम्म गर्न नसकेको सफलता हासिल गर्छन् ।
कोटेश्वर चोकबाट करिब पाँच मिनेट पश्चिम बालकुमारी पुल, पुलको पूर्वी भागबाट सि.सि.आर.सि कलेजहुँदै केही मिनेट हिँडेपछि यात्रीलाई देब्रे बनाएर नवजीवन शिशु निकेतन (माध्यमिक बोर्डिङ् स्कुल) आउँछ | त्यसै स्कुलकी संस्थापक तथा प्रिन्सिपल हुन् सीता चुडाल । हामीले बुझ्नैपर्ने उनै सीता चुँडालको जिन्दगीका आरोह-अवरोह कस्ता छन् त ?
उनको जिन्दगी पनि नितान्त खोला जस्तै छ । जसरी खोलाले भिरालो जमिनको सतहमा आफ्नो क्षमताभन्दा माथि उठेर द्रुत गतिमा दगुर्नु पर्छ; अगाडि कुनै डाँडाकाँडा वा उचाईको सतह आइपरे केही समय लिएर आफूमा शक्ति सञ्चित गर्नुपर्छ र उक्त सञ्चित शक्तिको प्रयोगले डाँडाकाँडा र उचाईलाई चुनौती दिँदै निरन्तर बग्नुपर्छ | हो, त्यस्तै निरन्तर नाम (जस्को यात्रा पनि नदीको जस्तै निश्चल र कारुणिक तर निरन्तर छ) हो सीता चुडाल ।
झापास्थित बिराटपोखर भन्ने ठाउँमा २०३२ सालमा उनको जन्म भएको हो । कक्षा सात सम्मको पढाइ उनले घैलाडुब्बास्थित आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालमा पूरा गरिन भने परिवारको बसाइँसराईले आठ, नौ र दसको अध्ययनका लागि विराटनगरको जनता मोडलमा पुगेकी उनी कक्षाकी मध्यम विद्यार्थी थिइन् । एस.एल.सि. उनले दोश्रो श्रेणीमा पास गरिन् ।
उनी बताउछिन्, “उबेला मेरो परिवार गाउँ–समाजमा एक सम्पन नै परिवारमा दरिएको थियो । परिवारको मूख्य पेसा खेती–किसानी नै भए तापनि बुबा खेतीका अलवा सामान्य व्यवसायमा पनि सम्लग्न हुनुहुन्थ्यो । गाउँमा छोरीहरूलाई विद्यालय पठाउने चेतनाको अभावकै समयमा भए पनि मेरो बुबा भने यसप्रति सचेत हुनुहुन्थ्यो ।”” यसैसँग जोड्छिन, “मलाई दस पास गर्दासम्म पनि खाना बनाउन आउँदैन थियो । आमा भने यस विषयलाई लिएर बेलामौका मलाई कराउने गर्नु हुन्थ्यो, तर बाबा भने उल्टै ‘पढ्नेलाई छोड्दे, छोरीले खाना पकाए तेरो काम के रह्यो त !’ भन्दै कराउनु हुन्थ्यो ।””
उनको परिवारका सबै शिक्षित रहेको र दुई आमाका गरी दस सन्तानमा दसै जना स्नातकोत्ततर पास रहेको कुरा पनि उनले बताइन् ।
उनको जीवनमा आरोह–अवरोहरूको शुरुवात एस्.एल.सी पश्चात हुन्छ । बोलीमा केही अवरोधहरू खडा गर्दै उनी भन्छिन्, “एस.एल.सी. लगतै परिवारको स्वीकृती बिनै मैले प्रेम विवाह गरेँ । तर त्यो विवाहको साथले मलाई एक वर्षभन्दा धेरै न्यानो सुरक्षा दिन सकेन । त्यहाँ पनि मैले पढाइको शुरुवात गरें तर निरन्तरता दिन सकिनं | काखमा दुई महिनाको छोरो थियो, म एक्लो भएँ ।”” उनका आँखा एकाएक भरिएर आउँछन् । केहीबेर उनको गलामा अवरोध सिर्जना हुन्छ । यस सम्बन्धका बारेमा उनले अरू बताउन चाहिनन् ।
मैले अघि नै भनिसकेको छु, सीता एक नदी हुन् । यो नदीको पहिलो मोड हो ।
त्यसपछि उनको जीवनले काठमाडौंसम्मको यात्रा तय गर्यो । यस यात्राको बारेमा उनी भन्छिन्, “त्यो सम्बन्धको समाप्तीपछि बुबाले मलाई काठमाडौं लिएर आउनुभयो । काखको छोरो त मैसँग आउने नै भयो । त्यो बेला बुबाले मलाई काठमाडौं ल्याउनुको कारण मैले बुझ्न सकेको थिइन्, अहिले प्रस्ट भएको छु ।”” यसो भनिरहँदा उनको अनुहारमा भावुकता यत्रतत्र छरपस्ट देखिन्छन् ।
काठमाडौं आएर उनले आफ्नो पढाइलाई पुनः पशुपति कलेज, चावाहिलबाट निरन्तरता दिइन् । स्नातक भने उनले पद्म कन्याबाट अर्थशास्त्रमा गरिन् । उनले आफ्नो पढाइलाई एउटा उचाईमा पुर्याइन । पढाईसँगसँगै छोराले पनि आफ्नो उचाई लिई नै रहेको थियो । जसमा साथ परिवारको थियो ।
स्नातकको पढाइसँगै उनले जागिरलाई पनि जोडिन । पहिलो जागिरदाताको रूपमा उनी सिद्दार्थ विद्यापीठलाई सम्झिन्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘सोचेको थिएँ, अर्थशास्त्रबाट स्नाताकोत्तर गरेर कुनै गाउँको शान्त वातावरणमा गएर कुनै क्याम्पस पढाउँने छु । तर सोचेको जस्तो भएन, मैले काठमाडौंमै बोर्डिङ पढाउन शुरु गरेँ । त्यो नै मेरो जीवनको दिशा थियो सायद ।””
नदी उर्फ सीता चुडालको दोस्रो मोड,
उनले स्नातकोत्तर शुरु नगर्दै पुनः दोस्रो विवाह गरिन् । जुन विवाहामा पनि उनको परिवारको सहमती थिएन । सम्झिन्छिन-“उहाँ पनि बोर्डिङ्मै गणित विषय पढाउनु हुन्थ्यो । साथै उहाँ आफ्नो पढाइमा पनि निरन्तर हुनुहुन्थ्यो । मेरो पढाइ फेरि रोकियो । बाबु (छोरा)लाई भने आमाले नै कक्षा दस पास गरुन्जेलसम्म रेखदेख गरिदिनु भयो ।””
विवाहपछि स्वभावतः सन्तान हुन्छ । उनको मातृत्वको दोस्रो सन्तानको रूपमा लक्ष्मीको जन्म भयो । छोरीको जन्मसँगै सीता एक गृहिणीमा मात्र सीमित भइन् । छोरी एक वर्षकी भएपछि पुनः उनी जागिरको खोजिमा निक्लिन् । भन्छिन्, “छोरो माइतमै थियो । उहाँ (श्रीमान) को कमाईले मात्र इच्छा पूर्ति गर्न गाह्रो थियो । आफ्नो आवश्यकता त जसरी पनि पुरा हुन्थे, तर मैले छोरोको आवश्यकता पनि हेर्नुपर्थ्यो । आफूले जन्म दिएर सधैँ माइतीको भर पनि कसरी पर्नु ? फेरि उहाँ छोरोको बारेमा त्यति सकारात्मक पनि हुनुहुन्न थियो । उसको लागि म जे जति गर्थेँ, उहाँबाट छलेरै गर्थेँ ।””
उनलाई यो जागिरको आवश्यकता नहुँदो हो त आज पनि उनी कतै गृहिणीमै सीमित हुन सक्थिन् वा कतै सामान्य जागिरमा अल्झिरहेकी हुन सक्थिन् । उनलाई त्यहीँ बाध्यात्मक परिस्थितिले आजको अवस्थामा उभ्याएको कुरामा उनी विश्वास गर्छिन् ।
“एक छोरोलाई माइतीको जिम्मा लाएकै थिएँ, फेरि जागिरको खाँतिर अर्की छोरीलाई पनि माइतीकै जिम्मा लाउने कुरामा मेरो मन मानेन । मलाई मेरो कर्तव्य र दायित्व खड्क्यो मनमा । त्यसर्थ छोरीलाई बेबी केयरमा राख्ने मनसाय बनाएँ ।” जति बेला उनले स्नातकोत्तर गरिसकेकी थिइन् । “तर के भैदियो भने, मेरो जागिर हुने थियो पाँच हजारको, बेबी केयरको खर्च तीन हजार । जुन कुरामा उहाँले मान्नु भएन ।””
त्यसपछि तेस्रो मोड अर्थात् “नवजीवन” को यात्रा शुरु भयो । उनलाई के सोचाई आयो भने, “यदि मैले बेबी केयर चलाएर, बच्चाहरूलाई पन्ध्र सयमै राखिदिएँ भने त मजस्तै अरू आमाहरुले त काम गर्न सके नि !”” उनको मनमा यही सोचाई बढ्यो र झाङ्गियो । जसको लहरा श्रीमानसम्म पुग्यो । यस कुरामा श्रीमानले पनि छानो भइदिने भरोसा दिए ।
यसकै शिलशिलामा उनले कोटेश्वरमा एक श्रेष्ठको घर फेला पारिन् । भुइँ तला । चार हजारमा । उनले यसकै लागि भनेर एक साथीसँग पाँच हजार ऋण मागिन । जुन उनको जीवनको पहिलो ऋण थियो । पहिलो सालमै उनले अठार जना बच्चा फेला परिन । जुन घरबेटीको ‘बच्चा फेला परेनन् भने कसरी भाडा तिर्छौ ?’ भन्ने प्रश्नको गतिलो उत्तर थियो ।
उनको इच्छाशक्ति,निरन्तरता र मनोबल समयको मागसँगै बढ्दै गयो |
उनी भन्छिन्, “पहिलो साल त्यही चार हजारको फ्ल्याटमा बित्यो । दोस्रो साल म कहाँ पैंतीस बच्चा भेला भए । जुन मेरो लागि ठूलो सफलता थियो । पहिलो सालका कोठाहरू बच्चाको संख्या बढेसँगै साँघुरिए । हामी अर्को घरमा केही फराकिलोपनका लागि सर्यौं ।”
काखकी छोरी आठ वर्षकी भएकी हुँदी हुन्, उनलाई अर्को सन्तानको रूपमा छोरी अर्थात् ओस्कारिकाको लाभ भयो । त्यो बेलासम्ममा स्कुल पनि बेबी केयरबाट निम्न माध्यमिक बनिसकेको थियो । मानौं त्यो स्कुल काखकी छोरी ओमेगासँगसँगै बढ्दै थियो ।
फेरि नदि उर्फ सीताको जीवनमा अनौठो मोड आयो ।
सानी छोरीको स्यारसुसारका लागि उनले घरमा एक जना केटी राखेकी थिइन् । उनलाई स्कुल र पढाइबाट फुर्सदै कहाँ मिल्थ्यो र ! खाना बनाउने, लुगाकपडा धुने र घरको सुगरसफाईका लागि उक्त केटी नियुक्त भएकी थिई । तर भइदियो के भने, उनको श्रीमानले उहीं घरमा काम गर्ने केटीलाई भगाएर भागे । “म स्कुल र आफ्नो अध्ययनमा यतिसम्म डुबेकी मैले आफ्नै श्रीमानलाई पनि सम्झिन बिर्सेछु, सायद । पुरुष मन न हो, खोज्यो विकल्प । फेरि म एक्ली भएँ ।”” उनी भावुकताको मुस्कान ओठमा दौडाउँछिन् ।
पहिलो विवाहबाट एक पुत्र, वैवाहिक सम्बन्ध असफल । दोस्रो विवाहबाट दुई छोरी लाभ तर उक्त सम्बन्ध पनि विफल । उनलाई लाग्छ, “समय आफ्नो अनुकूल कहिल्यै हुँदैन । बनाउनुपर्छ । अनुकूल समयमाभन्दा प्रतिकूल समयमा हामीभित्र बढी शक्ति सञ्चित भएको हुन्छ । यदि त्यो शक्तिलाई सही दिशा दिन सक्यौँ भनें जीवनको शब्दकोशबाट ‘प्रतिकूल’ भन्ने शब्द नै हराएर जान्छ ।””
श्रीमानले अर्को विवाह गरेर हिँडेको थाहा पाएपछि त नजीक ठानिएका मान्छेहरू नै वैरी भए सीताका लागि । बस्दै आएको घरबेटीको दुर्व्यवहार सम्झिँदै उनी भन्छिन- “श्रीमान्ले अर्को विहे गरेको पत्तो पाएपछि घरबेटीले एकाएक भाडा दोब्बर बनायो । ममाथि खराब नियत राख्न थाल्यो ।””
यत्ति मात्र कहाँ काफी थियो र भावीलाई ! चलाउँदै गरेको स्कुल लिजमा थियो । दस वर्षको कागजको म्याद सकिएको थियो । पुनः नविकरणको कुरामा त्यहाँ पनि घरधनीले एक्ली नारीमाथि आँखा लायो । दमन गर्यो । स्कुलै बन्द हुनगयो । तर उनीलाई थाहा थियो, हजार ढोकाहरू बन्द भए पनि एक झ्याल सधैँ खुल्ला हुन्छ । उनले त्यसैको प्रयोग गरिन । भन्छिन्, “वरिपरि गरी भेटेका जति कोठा र फ्ल्याटहरू लिएर केही महिना स्कुल चलाएँ । दुःख परेका बेलामा अभिभावकहरूले बुझ्नुभयो । विद्यार्थीहरू एक जना पनि घटेनन् ।”
तिनै फ्ल्याटहरूमा अझ केही दिन त प्लास्टिकका कुर्सी र सामान्य सुकुलमा राखेर स्कुल चलाएको सम्झिनछिन उनी | “खै कहाँबाट हो, केही डेक्स र बेन्चहरू सहयोग पनि आएका थिए । तर कसले पठायो भन्नेमा म अझै पनि अन्जान नै छु ।””यसपछि केही महिनामै अर्को ठाउँमा जग्गा लिजमा लिएर उनले विद्यार्थीहरूलाई एकत्रित गराइन ।
केही समयमै आफ्नै जग्गामा भवन बनाउने उनको योजना रहेको छ । आजसम्म आइपुग्दा त्यही बेबी-केयर नाम गरेको नवजीवन हलक्कै बढेर नवजीवन शिशु निकेतन मा.वि. भएको छ | अनि यसका धेरै हाँगाहरू पनि पलाएका छन् । यसको हाँगा कोटेश्वर, लोकन्थली, टिकाथली हुँदै नुवाकोटसम्म समेत फैलिसकेको छ ।
अहिले उनीसँग दुई स्नातकोत्तरको प्रमाण छ । आफ्नै कार छ, जग्गा छ । छोरा एम.बि.ए. गर्दैछन् । ठूली छोरीले प्लस टुसम्मको अध्ययन गरिसकेकी छिन् । सानी छोरी आफ्नै सोही स्कुलमा कक्षा ७ मा पढ्छिन् ।
हिजो कस्ले नै पो सोचेको थियो होला र ! नदी उर्फ सीता चुडालको जीवनमा यस्ता आरोह–अवरोहहरू आउछन् । र तिनै अरोह-अवरोहहरूलाई चुनौती दिँदै उनी आजको उचाईमा बिराजमान हुनेछिन् ।
सीताको शब्दहरू सापटी लिँदै, समय कहिले पनि अनुकूल हुँदैन । जति पनि मानिसहरूले जीवनमा एउटा मुकाम हासिल गरेका छन्, त्यो प्रतिकूलताको उपज हो । तर प्रतिकूल समयलाई चुनौती दिने हिम्मत भने हामीले राख्न सक्नुपर्छ । जिन्दगी न हामीले देखेँजस्तो सजिलो छ, न त हामीले भोगेँजस्तो गाह्रो नै । जिन्दगीको कुनै लक्ष्य नै नहोस्, तर यात्रा निरन्तर हुनुपर्छ । सारा दुनियाँले जेसुकै भनोस्, तर सो यात्रा आफ्नो अन्तरमनका लागि सकारात्मक हुनुपर्छ । चट्टान फोरेर पीपल त निस्कन्छ भने प्रतिकूलतालाई चिर्न कुनै गाह्रो कुरो भने होइन ।
Tags: एकल नारीकृष्ण ढुङ्गेलयात्रासीता चुडाल